सावधान ! खाना खाने बेला पानी पिउने गर्नुहुन्छ ? हुनसक्छ यस्तो रोगको खतरा – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Health/सावधान ! खाना खाने बेला पानी पिउने गर्नुहुन्छ ? हुनसक्छ यस्तो रोगको खतरा
पानी जिवनका लागि अत्यावश्यक तत्व हो । पानी बिना हामि जीवनयापन गर्न सक्दैनौ ।पर्याप्त पानी पिउनु मानव स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य कुरा पनि हो तर पानी पिउनुछ भन्दैमा खाना खाइरहेको बेला पानी पनि पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्दछ । खाना खाइरहेको बेला पानी पिउनाले स्वास्थ्यमा पर्ने असर यस्ता छन्ः
१. खाना खाँदै, पानी पिउँदै गर्नाले पेटमा अम्लियपना बढ्दछ । जसले खाना पच्दैन र एसिडिटीको समस्या आउँछ यसले पेट दुख्ने समस्या पनि बढ्छ ।२. खानासँगै पानी पिउनाले सरीरको मेटाबोलिज्म सुस्त हुन्छ,जसका कारण सरीरमा पर्याप्त उर्जा प्रवाह हुँदैन र मोटोपना बढ्दछ ।३. खानासँगै पानी पिउनाले खानेकुरा राम्रोसँग पच्न पाउँदैन,जसका कारण कब्जियतको समस्या आउँछ ।
४. खाना खाने बेला पानी पिउनाले डाइबेटिजको खतरा पनि बढ्छ ।५. सरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्दछ । जसले मृगौला तथा मुटुरोगको जोखिम बढाउँछ ।६. खानामा रहेका पोषक तत्वलाई सरीरले राम्रोसँग शोषण गर्न पाउँदैन र यसले पोषणको कमी हुनसक्छ ।७। सरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्दछ ,जसले मृगौला तथा मुटुरोगको जोखिम बढाउँछ ।